अहिलेको शैक्षिक अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
–	पहिलेको भन्दा सुधारात्मक छ । तर यो भित्र पनि धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर विद्यार्थीको रोजाई र उसको क्षमता अनुसारको कोर्ष डिजाइन गरी अध्ययन अध्यापन गराउँदा अझै राम्रो हुने देखिन्छ । साथै देश सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो शिक्षाको जरुरी छ ।
साउथवेस्टन स्टेटे कलेजले के–के सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ?
–	हाम्रो कलेजबाट गुणस्तरीय शिक्षाको साथै विद्यार्थी भित्र रहेका प्रतिभालाई बुझेर अन्य विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं । जस्तै प्रस्तुतीकरण कक्षा, यसमा विद्यार्थीले आफुले पढेको विषय अन्तर्गत स्लाइड तयार पारेर शिक्षक र आफ्ना साथीहरुका अगाडि अरु विषयको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्छन् । जसले विषयको विज्ञतामा वृद्धिगर्दै बोल्ने कलाको समेत विकास गर्छ । यसैगरी नैतिक शिक्षा अन्तर्गत बाहिरबाट विज्ञ मगाई जीवन सम्बन्धी महिनाको एक पटक कक्षा संचालन गर्छौं । त्यसैगरी हाम्रो कलेज क्ष्क्इ मा मान्यता प्राप्त हो । यहाँ ‘प्लस ट’ु अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा अध्यापन गराइरहेका छौं ।
सरकारको निजी कलेजहरु प्रतिको नीति नियमलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
–	सरकारले निजी कलेजहरुलाई स्वीकृति दिएर पठन–पाठन गर्नका लागि ठूलो सहयोग गरेको छ । यसको साथै समयसुहाउँदो र देशको माटोले मागे अनुसारको कोर्ष बनाएर हामीलाई दिइए शिक्षाको लागि हामी निजी कलेज संचालकहरुले देशका लागि अझ ठुलो योगदान गर्नसक्छौं । त्यसका लागि सरकारले अलि ठूलो छाति बनाई हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्छ । शिक्षासँग सम्बन्धित नीति नियमहरु समयअनुसार परिवर्तन गर्दै सवैलाई समेट्ने खालको बनाउन जरुरी छ ।
तपाईंको कलेजमा नयाँ भर्नामा आउन चाहने विद्यार्थीलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?
–	दश कक्षा पास गरेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आफूले पढ्न चाहेको विषयका बारेमा राम्रोसँग बुझी अगाडि बढ्न पर्छ । साथै आफूले पढ्न चाहेको कलेजको विषयमा पनि राम्रोसँग बुझी निर्णय गर्नुपर्छ । अरुको दवावले आफुले पढ्ने विषय छान्नु हुँदैन । आफूलाई थाहा नभएका विषय कलेज एवं स्कुलका गुरुहरुबाट सल्लाह र सुझव लिनुपर्छ । हाम्रो कलेजमा पढ्न चाहने विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले पहिले कलेजमा आएर बुझेर त्यसपछि पढ्न थाल्न सुझव दिन्छु ।
निजी कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको आरोप लगाइन्छ नि ?
–	निजी कलेजहरुले सम्पूर्ण खर्च आफूहरुले नै व्यहोर्नु पर्ने भएकाले विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा सुविधाका लागि विद्यार्थी भईबहिनीबाट शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । कलेजले दिने सेवा सुविधाका आधारमा शुल्क लिने गरिन्छ । यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले स्पष्ट नीति नियम बनाएर यसमा एकरुपता ल्याउन सक्छ । हामीले चाहीं सेवा अनुसार मात्र शुल्क लिइरहेका छौं । वास्तवमा हामीले विद्यार्थीको सेवा गरिरहेका छौं भन्ने विश्वासमा छौं ।
निजी कलेजहरुमा पढाइको गुणस्तर वृद्धिका लागि तपाईंको कस्तो सुझव छ ?
–	निजी कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेकै छन् । तर यसलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि निजी कलेजको तर्फबाट पनि विश्व बजारमा आएकार नयाँ शिक्षा प्रणालीको अभ्यासहरुको अध्ययन गरी हाम्रो देशमा पनि देश सुुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सवै निजी कलेज सञ्चालकहरु एक ढिक्का भएर देशको लागि र विद्यार्थी भाइबहिनीहरुका लागि थप केही गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि निजी कलेजहरुको देशको गुणस्तरीय शिक्षामा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । यसका लागि सरकार र समाजले पनि अझै जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दिइने सवै जिम्मेवारी वहन गर्न हामी निजी कलेज सञ्चालकहरु तयार छौं ।
निजी कलेजहरुले अनुभवी शिक्षक तथा प्राध्यापक राख्न छाडेको बताइन्छ नि ?
–	त्यसो होइन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ठूलो योगदान गरेका कलेजहरुले त्यसो गर्नै सक्दैनन्, गर्दैगदैनन् । बरु गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्ना शिक्षक तथा प्राध्यापक हरुलाई समय समयमा तालिम तथा गोष्ठिमा सहभागी गराई उहाँहरुसँग भएको क्षमता अझ वृद्धि गर्ने काम गरेका छौं । निजी कलेजहरुमा अभिभावकको समेत सहभागीता हुने भएकाले कम अनुभव भएका शिक्षक राख्ने सवालै उठ्दैन ।
साउथवेस्टर्न कलेजमा नयाँ भर्नाका लागि आउने विद्यार्थी हरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
–	हाम्रो कलेजमा उच्च शिक्षाका अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले पहिले कलेजको विषयमा राम्रोसँग बुझ्ने र त्यसका लागि विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई हामीले ‘काउन्सिलिङ्ग’को व्यवस्था गरेका छौं । विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले पढ्न चाहेको विषयको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउँछौं । साथै उनीहरुले पाउने छात्रवृद्धिको बारेमा पनि जानकारी गराउँछौं । यसका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, जीवन बुझ्ने कला, भविष्यमा उच्च अध्ययनको लागि बाटो सिकाउन हामी तयार छौं । त्यसैले हामीलाई माया र सद्भाव राख्ने सवै अभिभावकहरु, विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, शुभचिन्तक साथीहरुलाई हामीलाई विश्वास गरी विद्यार्थीहरुको भविष्य प्रति ढुक्क हुन आग्रह गर्दछौं ।
निजी कलेजहरुमा पनि राजनीति भित्रिएको छ, भनिन्छ नि ?
–	हामी राजनीतिमा संलग्न छैनौं । राजनीतिमा संलग्न भएका कलेजलाई पनि राजनीतिमा नलाग्न सुझव दिन्छु ।
अन्तिममा भन्नुस्, साउथवेस्टर्न कलेजको विशेषता के के हुन् ?
–हाम्रो क्ष्क्इ मान्यता प्राप्त कलेज हो । यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाका साथै प्रस्तुती करण कक्षा, सिभिक एजुकेशन कक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, हाइकिङ्गको व्यवस्था गरेका छौं । साथै यो वर्षदेखि अत्याधुनिक आफ्नै भवनमा अइटी वेस कक्षाकोठाहरु, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, व्यवस्थापन प्रयोगशाला, होटेल म्यानेजमेन्ट प्रयोगशाला, कम्पुटर प्रयोगशालाको साथै उच्च स्तरको पुस्तकालय एवं विद्यार्थीहरुको कला प्रदर्शनका लागि सभाहल एवं हाइजेनिक खानाका लागि व्यवस्थित क्यान्टिनको व्यवस्था गरेका छौं । विद्यर्थी भित्र रहेको प्रतिभालाई शिक्षासँग जोडेर विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छौं ।
प्रस्तुती पत्रकार सनत गिरी